သင့်ကလေး အငိုမတိတ်ရင် ဘာလုပ်ပေးမလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Family သင့်ကလေး အငိုမတိတ်ရင် ဘာလုပ်ပေးမလဲ?
သင့်ကလေး အငိုမတိတ်ရင် ဘာလုပ်ပေးမလဲ?
ကလေးတွေဟာ ဝမ်းနည်းနေတဲ့အခါ၊ ပင်ပန်းတဲ့အခါ၊ အစာမကြေပြဿနာတွေ ရှိတဲ့အခါ စသဖြင့် အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ငိုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးသေးသေးလေးဟာ စကားမပြောနိုင်သေးတာကြောင့် ငိုကျွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ နို့ဆာတဲ့အခါ သို့ ပင်ပန်းတဲ့အခါ၊ အနှီးလဲဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါ၊ ဗိုက်နာတာ၊ နို့တိုက်ပြီးလေထုတ်ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ သို့ သူတို့ကိုချီစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အများဆုံးငိုတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မျက်ရည်နောက်မှာ အကြောင်းရင်းတစ်ခု အမြဲတမ်းရှိပေမယ့် မေမေအသစ်တွေအတွက်တော့ ကလေးဘာ့ကြောင့်ငိုလည်းဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မိခင်လောင်းတွေအတွက် ကလေးအငိုတိတ်အောင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများကို အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ လက်မောင်းပေါ်မှာချီပြီး ဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်ပေးပါ
မေ့မေ့လက်မောင်းပေါ်မှာ နေရတာထက် ပိုပြီးသာယာတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ မေမေက သီချင်းလေးဆိုရင်း လက်မောင်းပေါ်မှာ သူ့ကိုအသာအယာပိုက်ပြီး လွှဲပေးတဲ့အခါ သူတို့လေးတွေ အံ့သြစရာကောင်းအောင် ငြိမ်သက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မေမေက တစ်နေ့လုံးအနားမရသေးရင်တော့ အဘိုး၊ အဘွား၊ အန်တီ၊ ဦးလေးနှင့် အစ်ကိုကြီး၊ အစ်မကြီးစတဲ့ တစ်ခြားမိသားစုဝင်တွေကိုလည်း ချီခိုင်းထားနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ ဒီအပြောင်းအလဲက ကလေးအတွက် ကောင်းစေပြီး ပင်ပန်းတဲ့ မိဘတွေအတွက် အနားယူချိန်ရရှိပါတယ်။
အိမ်ကနေ ဝေးဝေးသွားဖို့ မလိုပါဘူး။ အိမ်ထဲမှာသာ လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်မောင်းပေါ်မှာ သို့မဟုတ် တွန်းလှည်းထဲထည့်ပြီး ညင်ညင်သာသာ လှုပ်ရှားပေးတာက သူတို့ကို ငြိမ်သက်သွားစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ကျောပိုးအင်္ကျီလေးတွေအသုံးပြုပြီးလည်း ချီပိုးပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးဟာ အရမ်းငယ်သေးပြီး မရပ်မနားငိုတဲ့အခါ သူတို့မှာ လေထိုးလေအောင့်ခံစားနေရတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပြင်းထန်တဲ့ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုက အန်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာနှင့်အတူ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာရင် ကလေးရဲ့ ဗိုက် သို့ ကျောကို ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ သင့်ကလေးကို ရေချိုးပေးပြီးရင်လည်း နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
သင့်လက်တွေကို ပူနွေးအောင်လုပ်ပြီး baby oil သို့မဟုတ် အစိုဓါတ်ထိန်းခရမ်နှင့် ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပွတ်ပေးပါ။
၄။ သီချင်းဆိုပြတာ၊ သီချင်းဖွင့်ပေးတာ ပြုလုပ်ပါ
ဘေဘီလေးကို အငိုတိတ်အောင် မေမေတို့က သီချင်းဆိုပြတာ၊ သီချင်းဖွင့်ပေးတာ၊ ဂီတတူရိယာတစ်ခုခု တီးခတ်ပြတာ ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ သီချင်းက ကလေးရဲ့ အာရုံကြော စနစ်ကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
၅။ ကလေးကို အဝတ်အစားချွတ်ပေးပါ
တခါတရံမှာ ကလေးဟာ အရမ်းပူနေရင် ၊ အဝတ်အစားအထပ်ထပ်နဲ့ မသက်မသာ ခံစားရလျင် ငိုတတ်ကြပါတယ်။ နွေရာသီဆိုရင် သင့်ကလေးကို အနှီးလှပ်ပေးထားတာ၊ အင်္ကျီချွတ်ပေးထားတာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကိုယ်လုံးတီးထားပေးလိုက်ရင် ကလေးပျော်နေမှာပါ။ သူတို့က အရမ်းအေးနေရင်လည်း ငိုတတ်ကြပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင် ကလေးကို နွေးနွေးထွေးထွေးထားပေးပါ။
ဒါကတော့ ဘယ်တော့မှ ပျက်ကွက်လို့မရတဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက နို့မဆာရင်တောင် မေမေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နို့တိုက်လိုက်ရင် သူတို့ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကလေးက အနှီးထဲမှာ သေးစိုနေတာ သို့မဟုတ် အင်းအင်းပါထားတာဆိုရင် သက်တောင့်သက်သာမရှိတာကြောင့် ငိုနေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့က အနှီးစိုမစိုကြည့်ပြီး အသစ်တစ်ခုလဲပေးရပါမယ်။
ဒီနည်းလမ်းတွေ အားလုံးနဲ့ ကြိုးစားချော့ပေမယ့် တအီအီနဲ့ အငိုမတိတ်ဘူးဆိုရင် ကလေးအထူးကုကို သွားပြဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ သင်မခွဲခြားနိုင်တဲ့ အချို့သော နာကျင်မှု ကြုံတွေ့ရတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleမြေအောက်ခန်းထဲမှာ အမှောင်ချပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းသူ
Next articleကုမ္ပဏီသုံး စက်ပစ္စည်းဖြင့် ဖုန်းတိုင်ပေါ်က ကြောင်ကယ်တင်ခဲ့လို့ အလုပ်မှ ရပ်ဆိုင်းခံရခဲ့ရတဲ့ ၀န်ထမ်း